Ciidamada xoogga oo dhaq-dhaqaaqyo ka wado Shabeellada hoose. -News and information about Somalia
Home Warkii Ciidamada xoogga oo dhaq-dhaqaaqyo ka wado Shabeellada hoose.
Ciidamada xoogga oo dhaq-dhaqaaqyo ka wado Shabeellada hoose.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada Danab ay saakay dhaq dhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan inta u dhexeysa Wanla weyn iyo garoonka Balli-doogle ee gobolka Shabeellada Hoose.
Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo ay ku qaadeen garoonka Balli-Doogle,halkaasi oo ay joogaan ciidamada Danab iyo kuwa Mareykanka.
Goobjoogayaal ku sugan gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in saakay in ay arkeen ciidamo aad u hubeysan oo dhaq dhaqaaqyo ka wado inta u dhexeysa Wanla weyn iyo garoonka Balli-doogle ee gobalka shabeellada Hoose.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka gobolka Shabeellada hoose ayaa Warkii Online u sheegay in ujeedka dhaq dhaqaaqan uu yahay sidii looga hortagi lahaa weerarada Al-Shabaab ay ka fuliyaan deegaanada ka tirsan gobolka shabeellada hoose, islamarkaana laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi.
Previous articleGaadiidka isticmaala Muqdisho iyo Jowhar oo maalintii labaad hakad ku jira
Next articleGuddoomiyaha Degmada Garbahaarey Oo Ku Xayiran Magaalada Muqdisho
Booliska Somaliland oo Albaabada isugu dhuftay xaruntii Telefishanka HornCable ee Hargeysa...